Ndị na-eto eto na-eto eto n'ụlọ: ọdịiche dị iche iche na nkà na ụzụ na mgbagwoju anya nke ịdebe n'ime ụlọ, ịzụlite, inye nri, ilekọta ọkụkọ na ọkụkọ ozuzu - Ugbo - 2020
Mpempe ego nke broilers (ma ọ bụ crosses) na-ejikọta ụdị anụ ọhịa dị iche iche, bụ ndị kwesịrị ekwesị na-ewu ewu ma n'ime ugbo ndị mmadụ na nnukwu ugbo. A na-akọwa abamuru nke ịzụlite mmiri na-ebu ọnụ: n'ime ọnwa 2, onye ọ bụla na-ebute ibu arọ.
Ịzụlite na ịnọgide na-ebu obe nwere ụfọdụ iche site na ịzụlite nke hens. Maka isiokwu a, anyị ga-amụta na-eto eto na ụlọ.
Okwu ole na ole banyere nkume
Kedu otu esi ahọrọ àkwá kwesịrị ekwesị?
Afọ site na ụbọchị efu
Ọkụ ọnwa ọ bụla
45-50 ụbọchị ndị mmadụ n'otu n'otu
Ndị okenye na-azụ anụ n'ụlọ
Ihe dị na Cellular
Dị ka azụmahịa: uru na uru
Omume, esemokwu na mgbagwoju anya nke ọdịnaya
Broiler bụ ngwakọ nke ọkụkọ anụ ahụ nke na-ata nri mgbe ọ na-agafe ọtụtụ ụdị anumanu. Ogbere dị iche na ụmụ nnụnụ nkịtị n'oge ntozu okè. N'ihi igbu egbu oge, ndị na-ere mmiri anaghị ebi ndụ na mmalite nke mmepụta mmanụ.
Na ndepụta nke atụmatụ ndị ọzọ, e nwere:
nnukwu nha (roosters - aka 6 n'arọ, hens - 4-5 n'arọ);
nku na ụkwụ dị mkpụmkpụ;
uru bara uru;
nnukwu mkpa maka nri.
Nyere aka! N'adịghị ka anụ ụlọ, ndị toro eto na-etolite n'ọgba. Nkà na ụzụ na-eto eto na-arụsi ọrụ ike. Mgbanwe kacha nta na ìhè na-enwu gbaa - ọnọdụ bụ isi maka ahụ ike na uto nke ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ihe mgbagwojuanya nke ihe di n'ime ya bu ihe di iche iche choro n'obe di iche iche. A na-edebe ọrịa ọkụ n'ime ụlọ ebe ikuku ikuku dị ala karịa ogo 30. Site n'izu nke abụọ, ọnụ ọgụgụ a dị ala. 26. N'ụbọchị mbụ nke ndụ, ọ dị mkpa ka ọkụ dị na ọkụkọ coop na-ere ọkụ (na-ekwenye na uru bara uru).
Ihe dị mkpa maka nchezi kwesịrị ekwesị bụ ezigbo ventilashị na ịdị ọcha, ebe ọ bụ na ndị na-enweghị nsogbu na-adịghị akwaga akwa, na nchịkwa na-akpalite ọrịa ndị dị ize ndụ n'ime ha.
N'adịghị ka stereotype a na-ahụkarị, broiler abụghị ụdị, kama ọ bụ obere ego. Kwa afọ, ndị na-azụ atụrụ na-arụ ọrụ na ịzụ ụmụ ọhụrụ. Iji mee nke a, họrọ nnụnụ ndị kasị buru ibu, ndị na-eguzogide ọgwụ ma dị mma. N'afọ gara aga, a na-azụ anụ ọhịa atọ.
COBB-500. Ogbugbere ndị a na-ebute arọ igbu egbu kachasị na izu isii (tụọ 2-2.5 n'arọ). Atụmatụ - akpụkpọ anụ akpụkpọ ahụ, ndị na-eguzo ọrịa, nnukwu ọnụego ndụ. Chickens nwere nnukwu paws na oke ara.
ROSS-308. A na-ahụ oke dị iche iche site n'ọtụtụ dị ịrịba ama: n'ihi na otu ụbọchị, ọkụkọ na-enweta 40-60 g. Anụ ahụ dị mma karịa nke COBB, ma ara ya dị oke na anụ.
ROSS-708 - onye ndu na ndepụta nke udiri ohuru. Na-eto eto na ọnwa nke mbụ ruru kilogram 2.5. Agba akpụkpọ nwere ụcha acha.
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke crosses cross - oke oke nha nke incubation. Ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ na-adụ ọdụ ịzụta àkwá site na obere oyi akwa.afọ ole ọ ga - erughị afọ abụọ (oge kachasị mma bụ ọnwa 8-10). Ụdị eggching nwere ọdịdị ziri ezi, ákwà ndochi na ogo dị arọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na nhọrọ ịhọrọ nha nha nke ahụ - nke a bụ nkwa nke ọdịdị nke otu chicks.
Ịdakwasị incubator enweghị ike buru nnukwu àkwá - ha nwere nkedo dị mkpa, nke nwere ike ịmepụta obere cracks. Site na obere mmebi n'ime akwa (embrayo) ọrịa na-abanye n'ime ya.
Chekwaa àkwá tupu ịtọba na incubator nwere ike ịbụ ihe karịrị ụbọchị 3. Oge dị ogologo na - eme ka ohere nke ịmepe iche iche dị iche iche na ahụ ike nke ụmụaka. Ọ dị mma ka ndị ọrụ ugbo novice ghara ịzụta àkwá, ma ọ bụ chicks nke oge a - nke a ga-azọpụta oge, ego na ike maka ikpuchi onwe ya.
Ndị na-eto eto maka anụ na-achọ nkwado siri ike na usoro nri, nhọrọ nke nri kwesịrị ekwesị na ịrapara oge. N'ime oge uru bara uru, obe ga-achọ ka ihe oriri bara uru. Fattening kwesịrị ịmalite site n'ụbọchị mbụ nke ndụ ọkụkọ. Millet na nsen sie nwere ike inye ụmụaka, site n'ụbọchị nke anọ nke ndụ, elu na mash ga-ebute. Nnụnụ na-eto eto na-eri nri, nri mkpofu, ihe ndị ọzọ ịnweta.
Mgbe ị na-ahọrọ ọkụkọ, ọ ka mma ịkwụsị nhọrọ gị na ndị mmadụ dị afọ 10. Kwa ụbọchị, ọ na-esiri gị ike ịnabata ụgbọ njem na ogologo oge.
Ihe mbụ chicks kwesịrị inweta mgbe ọ na-egbu bụ obere nsị nke mmiri dị ụtọ. Ke 1 liter nke mmiri ọkụ kwesịrị diluted 1 tsp. shuga na mmiri ọkụkọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enye ha òkè nke sie àkwá. Ihe ndabere nke nri na ụbọchị ise mbụ bụ obere cheese cheese, ngwakọta nke nri na àkwá. A ghaghị itinye ihe mkpuchi nke potassium permanganate na mmiri maka ịṅụ mmanya. N'ụzọ dị iche, ugboro abụọ n'oge a, a ghaghị inye chicks ihe ngwọta nke glucose.
Nri ndepụta nri nri. Nye ya chicks na icha mmiri na mgbakwunye nke elu, buttermilk ma ọ bụ yogọt (yabasị ruru na nri 1:20). Chives nwere mmetụta antiparasitic na eriri afọ. Ka oge na-aga, pasent nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eri kwesịrị ịrị elu na 10.
Ị nwekwara ike jikọta shells ogbugbo, carrots grated n'ime nri. Site na ụbọchị 10 ịkwesịrị ịme ogwu megide ọrịa. Maka mgbochi nke coccidosis na ụbọchị 14, a na-agbara Baycox n'ime ahụ (1 g kwa 2 lita mmiri).
N'ime oge site na ụbọchị 10 ruo 14, ihe gbasara ihe gbasara nke a bụ elu. Maka prophylaxis, ọ dị mkpa iji ọgwụ nje mee ihe maka ụbọchị 4. Na mmiri maka ịṅụ mmanya kwesịrị ịgbakwunye otu tụlee nke ayodiin. Mgbe i mechara ọgwụ nje, ọ dị gị mkpa iwepụ ezumike maka ụbọchị 3, ma nyezie ndị mmadụ n'otu n'otu.
N'oge a, ụmụ anụmanụ na-eto eto na-agafe na nri ndị a na-etinye na granulated (dị na ya, ọka, protein, amino acids). Agaghị ewepụ elu na nri.
Nhọrọ ọzọ iji nye nri - n '
ọka wit (barley, barley, peas equal balance);
agwakọta mmanụ azu;
azụ ma ọ bụ nri ọkpụkpụ;
ntakịrị tụlee nke whey ka ọ na-ehicha.
Mee ka ihe ndị ahụ dị mma ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ. Mgbe ahụ, tinye chopped elu (yabasị, kabeeji, letus) na ngwakọta. Ngwá ọkụ dị mma na ụlọ maka ọkụkọ kwa ọnwa bụ ogo 23, ogologo oge nke ìhè bụ awa 14.
Nri nri kachasị mmadị ka nri a gwara ọgwa na-egosipụta na ọ dị njọ na anụ anụ. Ghaa ọka na trough achọrọ ya na shells, nzu. Kwa ụbọchị ole na ole, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji sie obere azụ, herbs, ọka wit (components dịgide ruo awa 3). Site na iri anọ na ise, a machibidoro inyefe ọgwụ ọ bụla.
O kwere omume na-eto eto na ọtụtụ ụzọ, nke ọ bụla nwere nuances ya. A na-ejikarị cages ma ọ bụ pensozi pụrụ iche maka nhazi nke ndị na-ere mmiri.
Nhọrọ kacha mma maka obe ndị na-azụlite na obere mpaghara (na mba, na mbara). Broilers nwere àgwà phlegmatic ma na-echekarị na ohere dị oke. Ihe dị n'ime mmadụ 1 n'ime ụlọ a abaghị uru site na nchịkwa dị ọcha ma dị ọcha (ọ bụrụ na otu onye na-arịa ọrịa, ọrịa ahụ gbasaa na ìgwè anụ ụlọ ahụ dum).
Mbibi nke ịgha mkpụrụ na-ere ihe n'ime ụlọ a kwesịrị ịbụ:
maka ọkụkọ - mmadụ 18 n'otu 1 sq. m;
ụmụ nnụnụ - 9 isi kwa 1 sq.m.
A na-atụ aro ka ịmebe mkpụrụ ndụ iji jide obe 3-5. N'ime otu oghere i nwere ike idebe karịa isi 10. Nnụnụ kwesịrị ịnweta ohere nri n'otu oge. Tinye ya na mgbidi ihu, a ga-etinye karama mmiri ahụ n'elu feeder. Jide n'aka na ị ga-eme ka ha bụrụ ihe na-ewepu ka ha ghara ikwe. A na-ekwe ka a na-etinye sẹẹlị, mana tupu etinye ihe ọhụrụ ọ dị mkpa ịhazi ma kpochapụ ha.
Ufuru a na-ere na-adabara maka usoro a, nke akụkụ nke ebe a na-agba ya gburugburu site na nzacha nke ọma. A gaghị etinye ihe karịrị mmadụ iri na otu n'ime pen. Ọ bụrụ na ụlọ anụ ahụ buru ibu, maka iri nke ọ bụla, a ga-ekewa akụkụ dị iche. N'ime mkpịsị akwụkwọ ahụ, a kwadebere ya na ndị na-aṅụ mmanya na ndị na-eri nri. A na-atụ aro ka a kpuchie ala ahụ na ngwakọta nke sawdust, ibe na peat. Ọ dịghị mkpa iji ahịhịa, n'ihi na ọ nwere ike ịkpata aspergillosis.
Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ịghachite broiler maka ihe karịrị ọnwa 2, ka uto na-ala ngwa ngwa, na mkpa maka nri na-adị elu. Nnụnụ ahụ na-eri ọtụtụ ihe oriri, anụ ya na-adighi ike ma sie ike karịa oge.
Na-eto eto karịa ọnwa 2 dị mma naanị maka mkpụrụ. Maka nzube ndị a, a ga-edebe ndị nwere ahụike na-eguzogide ọgwụ (2 nwanyị na nwoke 2).
Kedu ihe ọzọ dị mkpa ka onye ọhụụ mara:
Ihe achọrọ maka ime ụlọ - ima ọkụ, nkụ, akwa akwa dị n'ala.
Ịhazi ụlọ ahụ mgbe niile. Mgbidi na ihe owuwu ụlọ kwesịrị ịgwọ ya ma ọ bụ disinfectants pụrụ iche.
Nri nri ziri ezi na usoro ụbọchị.
Oge ịgba ọgwụ mgbochi.
Na n 'ulo ozuzu nnunu na eri nri, n'ihi na o nwere ihe ndị dị mkpa maka uto na-arụsi ọrụ ike. Ndị na-ere nri na-eri nri na mmiri shuga. A na-ahụkarị obe dị iche iche site n'enyeghị nri na nri: ha nwere ike ịzụta ihe oriri. Ọnọdụ dị mkpa bụ nri ọhụrụ (nri ekwesịghị ịrịa oke na feeder).
Ọ ga-ekwe omume ịkwalite uto site n'enyemaka nke ngwakọta nke yist - ọka na-agwakọta ya na yist achicha ma tinye ya maka awa asaa. Iji tinyekwuo kalori nwere ike tinye ugu, poteto.
N'ime ndepụta nke ngwaahịa a machibidoro maka mba ndị na-agafe, ndị na-esonụ dị iche:
nri zuru oke;
sie poteto na ụdị dị ọcha.
Nyere aka! Iji mee ka anụ dị nsị ghọọ odo, site na izu atọ nke ndụ ha, a ghaghị ịba ọka n'ime nri (35% nke nri ndị ọzọ).
Iji na-eri nri nnụnụ ndị ị chọrọ ọcha ma dozie mmiri (okpomọkụ 20-22), ịnweta ịṅụ mmanya si n'aka ndị mmadụ kwesịrị ịdịgide. Maka disinfection nwere ike tinye na kristal mmanya nke potassium permanganate.
N'ihi enweghị nkwarụ na-adịghị ike, crosses nwere ike ịdaba na ọrịa dị iche iche. Maka mgbochi nke anụ ụlọ, ọ dị mkpa ịme ọgwụ, ileba anya na ịdị ọcha nke ụlọ nne ọkụ, na ịhapụ ndị mmadụ na-eme ihere na ndị a na-agbapụta oge n'oge.
Nso oria ndị dị n'ihe ize ndụ:
Ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ebu ibu bara uru na-akpata nsogbu nkwonkwo. Ihe ọzọ na-akpata mmepe bụ ọrụ mberede na-adịghị ike. Mgbaàmà - "daa n'olu ya." Ị nwere ike ịgwọ ọrịa ahụ na ampicillin.
Heticosis Pathogen - ikpuru ogwu. I nwere ike ikpochapụ ha site na enyemaka nke Piperazin.
Ascites - ụba nke anụ abụba ke afo. Ihe kpatara mmepe bụ nri na-ezighi ezi. Mgbochi ọrịa bụ ịba pasent nke ọkwa ọhụrụ na ndepụta ahụ.
Ọrịa Newcastle (ma ọ bụ pseudotum). Ọrịa na-efe efe nke nwere ike igbu otu ìgwè ehi na ụbọchị ole na ole. Ihe oyiyi na-apụta site na onu okuko, ọnọdụ okpomọkụ na-ebili, feathers nwere ọdịdị disheveled. A naghị agwọ ọrịa a, otu mgbochi - naanị ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ahụ Marek. Enwere mmeri nke usoro etiti. Na crosses nchikota nwere nsogbu, enwere nsogbu. N'ebe ndị ahụ dị ize ndụ site na izu 3 ruo ọnwa 5. Mgbochi - ịgba ọgwụ mgbochi (arụmọrụ nke usoro 95%).
A na-egbu ndị na-egbu nri maka nkezi nke ụbọchị 50 (na afọ a, ibu nnụnụ dị 4-5 kg). Ala oru ugbo a ga-aba uru n'iru isi ato ato, ma obuna onu ugbo ugbo ga-akwụ kwa afo. Ọnọdụ bụ isi bụ ịchọ maka ọwa ahịa na ikiri asambodo.
Ọnụ ego nke otu ìgwè anụmanụ dị ka nke a:
egbu nke ikpe - 15 000 rubles;
ihe oriri chicken coop - 50,000;
ahia anụ ụlọ - ruo 70,000.
Ịmalite itinye ego na azụmahịa ga-abụ na ọ dịkarịa ala 150,000 rubles. Ọnụ otu onye ozu n'ahịa bụ ọ dịkarịa ala 200 rubles, a pụkwara irere ya maka 150 ọzọ. Na ire ere 100, ị nwere ike ịnweta ọ dịkarịa ala 16,000 kwa ọnwa. Ntufu ego na ụtụ isi, uru ego maka ọnwa 1 bụ 8,000-12,000 rubles. Azụmahịa siri ike na uru dị ukwuu ga-ekwe omume na otu ìgwè nke 600 ma ọ bụ karịa.
Ogbugbere - ntinye pụrụ iche nke ulo ozuzu okuko, nke a na-eji uto na-arụsi ọrụ ike. Ndị na-eto eto na ndị na-eto eto na-enwe nsogbu, kama ọ bụ ahịa bara uru. Mgbe ị na-agbaso ihe ndị dị mkpa na iwu, obe ga-abụ isi iyi ego na-akwụ ụgwọ. Erite uru ga-eweta nri dị ụtọ ma na-eri nri, gbanyụọ.